Blọọgụ Teknụzụ dị mkpa Martech Zone. Mgbe m dere banyere otu teknụzụ akọwapụtara na-emetụta ahịa, ọ na-abụkarị mkpali site na teknụzụ teknụzụ. Ha na-arụ ọrụ dị ukwuu na ikpuchi ozi ọma na echiche banyere teknụzụ, mana ịhapụ ngwa ahịa ya bara uru.
Nnukwu ụmụ nwoke na-anwa ịnata scoop akụkọ kachasị ukwuu, asịrị kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ na-anwa ịtụba nnukwu aha post nke na-adọrọ uche mmadụ niile. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-aga na Teknụzụ nke ị kwesịrị ịma banyere ya. Ndị folks a nọ n’elu ya oge niile!
Lee blọọgụ teknụzụ 10 nke ịmaghị gbasara:
Kedu ihe Noo - Patric bụ ezigbo enyi na ụlọ ọrụ ya na-akụzi ‘ndị na-abụghị techies’.
Ngwa mmalite - Nke a blog na-eme ka teknụzụ dị mfe ọgụgụ.